श्रीमानको ह*त्याको आरोपमा श्रीमती र छोरा प्र*काउ – Fewa Times
श्रीमानको ह*त्याको आरोपमा श्रीमती र छोरा प्र*काउ
प्रकाशित मिति: October 9, 2019 8:11 am
सप्तरीमा एक ज्येष्ठ नागरिकको ह*त्या आरोपमा उनकी श्रीमती र छोरा प*क्राउ परेका छन् । कुटपिटबाट मृ*त्यु भएप*श्चात् फरार महादेवा गाउँपालिका–१ पकरीकी ५० वर्षीया जमुनी खातुन र उनका छोरा २३ वर्षीय नइम पमरियालाई सप्तरी प्र*हरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।
आइतबार राति मदिरा सेवन गरेका नइम र जमुनीको कुटपिटबाट ६२ वर्षीय मो. गफुर पमरियाको मृ*त्यु भएको बताइएको छ । गफुरलाई उनकै श्रीमती जमुनी र कान्छा छोरा नइमले कु*टपिट गरी ह*त्या गरेको भन्दै मृ*तकका भाइ मो. इसराइल पमरियाले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।
आ*रोपितलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्य शुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले बताए ।